Retort autoclave, Retort sterilizer, kettle misy palitao - Shenlong
Fivarotana mafana fivarotana rano mafana Retortika Auto ...
Ny varotra tsara indrindra Indostrialy Planeta Cooki ...
Zhucheng Shenlong Masinina Factory ， natsangana tamin'ny 2004, dia iray amin'ireo mpamokatra lehibe ho an'ny hafanana avo lenta sy ny fiakaran'ny tosidrà ary ny kettle vita amin'ny jacky any Shina. Izahay dia tena mamokatra rano manitrika 、 rano miverina / cascading retort, retort rotary, retort pilot, retort elektrika sy etona, retort solika, retort voaroaka ary kettle vita amin'ny jackets.
Zhucheng Shenlong Masinina
Izahay dia tena mamokatra rano manitrika 、 rano miverina / cascading retort, retort rotary, retort pilot, retort elektrika sy etona, retort solika, retort voaroaka ary kettle vita amin'ny jackets.
Dingana fiasan'ny vilany sterilization
Amin'ny dingan'ny fanamorana, ny saina dia tokony homena ny setroka voalohany, ary avy eo dia mandany ny etona, mba hivezivezy etona. Azo esorina ihany koa isaky ny 15-20 minitra mba hampiroboroboana ny hafanana ...
Dingana fiasa sy fepetra fisorohana ny vilany
Raha vao jerena, ny vilany fanamasinana dia heverina ho vilany mahazatra. Raha ny marina dia tsia. Ny vilany misy ny sterilisation dia fitaovana fanamafisam-peo lehibe ary tsy io no vilaninay mahazatra ....